Sawirro taariikhdii Mandela - BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal
Sawirro taariikhdii Mandela
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 6 December, 2013, 22:16 GMT 01:16 SGA
Nelson Mandela, oo noqday Madaxweynihii ugu horreeyay ee madow ah kadib dagaal dheer oo uu la galay caddaankii tirada yaraa, ayaa geeriyooday.
Waxaa dhalay nin caaqil ka ahaa Bariga Cape, wuxuuna u baxsaday magaalada Johannesburg, halkaasi oo uu qareen ka noqday kuna biiray ANC.
Markii uu yaraa Mr Mandela waxa uu jeclaa in uu noqdo feeryahan. "Feerku wuxuu u taagan yahay Sinnaan. Gudaha wareegga, darajo, da'a, midab iyo hanti midna qiimo kuma fadhido," ayuu ku qoray buuggiisa, Safarkii dheeraa ee xoriyadda.
Sanadkii 1956 waxaa lagu eedeeyay khiyaano qaran hawshii uu u haya ANC. Intii ay maxkmadda socotay,m wuxuu la kulmay Winnie Madikizela. Guurkiisii ugu horeeyay Evelyn Mase wuxuu ku dambeeyay furiin.
Nelson iyo Winnie waxa ay is guursadeen 1958 laakiin marnaba nolol raaxo leh islama qaadan iyagoo marna xabsi ku jiray marnka banaanka joogay.
Kadib maxkamad kale oo lagu soo eedeeyay qaa'inul wadannimo, ayaa waxaa lagu xukumay xabsi daa'id sanadkii 1964.
Olole caalami ah ayaa bilowday oo ka dhan ah midab-takoorka. Inkastoo cunaqabatayn dhaqaale oo xoog leh aan waligeed la soo rogin, hadana dad magac ku leh adduunka iyo dad caadi ah oo dunida oo dhan isaga yimid ayaa cadaadis ku hayay dolwadda.
Nelson Mandela wejigiisa waxa uu calaamad u noqday guud ahaan ololihii caalamka.
Ugu dambeyn in ka badan labaatan sano markii uu xirnaa Mandela waxa xabsiga laga sii daayay 1990.
Kadib markii la sii daayay Mr Mandela waxa uu booqday dalal badan, waxaana uu la kulmay madax badan isagoo isu diyaariyay in Madaxweyne loo doorto.
Wada hadalo adag ayaa ka horreeyay ka hor intii aan Madaxweynihii Koonfur Afrika FW de Klerk aanu oggolaan in qof walba codkiisa dhiibto.
Doorashooyinkii ugu horreeyay ee dimuqraaddi ah ee Koonfur Afrika waxaa ka qabtay 27 April 1994.
Mr Mandela waxa uu Madaxweyne ahaa hal xilli keliya, waxaana sanadkii 1999 uu noqday mid ka mid ah hoggaamiyayaasha fara ku tiriska ah ee Afrika ee iskood xilka uga degay.
Waxa uu noqday nin astaan u ah waddaniyadda waxaanu caan ku ahaa shaarkiisi midabada lahaa.
Waxa uu lahaa laba dabeecad oo kale oo hoggaamiyaashu inta badan lahayn, isla wayni la'aan iyo in uu awood u lahaa in uu iska qosliyo, waxaa sawirka uu la joogaa Amiir Charles-ka Britain iyo gabdhaha heesa ee kooxda ah Spice Girls.
Kadib markii ay is fureen Winnie, Mr Mandela waxa uu uu guursaday Graca Machel sanadguuradii dhalashadiisa 80aad 1998. Ms Machel waxaa ka dhintayy madaxwaynihii hore ee Mozambique Samora Machel. Mr Mandela iyo Gaca Machel waxay dhiseen sanduuq lagu caawiyo caruurta Africa ee dhibaataysan.
Tan iyo markii uu xilka ka degay 1999 Mr Mandela waxa uu noqday danjire-sare oo la dagaallama cudurka HIV/Aids, isla markaana wuxuu keenay in dalkiisu xaq u yeesho in uu martigaliyo cayaaraha adduunka sanadkii 2010.
Sanadkii 2004 isaga oo 85 jir ah ayaa Mandela uu hawlgab ka qaatay hawsha bulshada, isla markaana go'aansada inuu waqti dheeraad ah la qaato qoyskiisa,
Mr Mandela waxa uu sameeyay soo bixitaan aan looga baran xafladdii xiritaanka ee Koonkii adduunka 2010. Markaas aad ayuu u liitay caafimaadkiisa, wuxuuna wali ku jiray murugada gabar uu awoow u ahaa oo geeriyootay, oo dhimatay bilowgii tartanka.